UMzansi ulahlekelwe ngamaphoyisa ayi-193 ngenxa ye-covid | Scrolla Izindaba
UMzansi ulahlekelwe ngamaphoyisa ayi-193 ngenxa ye-covid
Ngemuva kwezinyanga ezingaphezu kwezinhlanu besemgqeni wokulwa nalolu bhubhane, amalungu Ezinsizakalo Zamaphoyisa aseNingizimu Afrika abulawe yi-covid.
Ngesikhathi kusabalala lolu bhubhane iziteshi eziningi zamaphoyisa zavalwa ukuze zizohlanzwa kanti izinkulungwane zamaphoyisa zahlolwa zatholakala zine-covid-19.
Kuleli sonto uKhomishana wamaphoyisa kazwelonke uKhehla Mfeka wethule indawo yokugonqa kanye neyokubeka imibhede eyi-160 eyenzelwe amaphoyisa kuphela.
Iphoyisa lase-Mount Frere uHunter Leqela ubazi mathupha ubunzima bokusinda kwi-covid-19.
“Lokhu kuzoba wukungenelela okuwusizo kakhulu ngoba bekunzima kakhulu ukuthi amaphoyisa akwazi ukugonqa.
“Ezimweni eziningi amaphoyisa asebenza kude namakhaya nemindeni yawo ngakho-ke aqasha ezindlini ezincane ezingemuva emadolobheni.
“Ukugonqa wedwana ungekho eduze komndeni kuba nzima kakhulu.”
Isikimu Sezokwelapha Samaphoyisa sivule indawo yokuqala yokuhlukaniswa kwamaphoyisa e-Tshwane SAPS Academy ngoLwesine.
Phambilini uKhomishana wamaPhoyisa uBheki Cele usigxekile isibalo samaphoyisa ashonele emsebenzini ngenxa ye-covid-19.
“Ubhubhane lwe-covid-19 selushintshe indlela yobuphoyisa bendabuko – ukuqhelelana sekuyinto ejwayelekile, okwenza kube nzima ukubopha nokuthunyelwa Esikhungweni Somsebenzi Womphakathi kudinga inqubo ehlukile yokusebenza.
“Bonke abesilisa nabesifazane abampunga ohlaza okwesibhakabhaka eRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika bashayisane noshintsho olukhulu lwezinto futhi kwadingeka ukuthi balungise ngokushesha ngenkathi kugxilwe ekusebenzeleni nasekuvikeleni isizwe.
“I-Covid-19 isiphazamise kakhulu ngomoya wethu wobuntu. Namuhla asikwazi ukungcwaba amalungu ethu amaphoyisa.
“Abaningi babo abakwazanga ukungcwatshwa ngendlela ebibafanele futhi lokhu kubuhlungu kakhulu, kodwa sizoqhubeka nokulwa futhi sisebenzele isizwe.”